China Kinetic LED nalka iyo saarayaasha |Fyl
LED kubbadda cagta
Kubadda Beam Wareegaysa
Bar saddex xagal
Guddi saddex xagal ah
Iftiin afar geesle ah
Usha laba jibbaaran
Nalalka LED-ka Kinetic
1 nalka LED ee 1 winj
Cabirka nalka: 60x106mm
heerkulka midabka: 2700K
Kanaalka DMX: 9ch
Taariikhda Gelida/Demida: 3-pin XLR DMX
Korontada Gudaha/ Deminta: Xidhiidhiyaha Korontada
Faa'iidada shirkadaha kiraynta: Aad bay ugu habboon tahay oo dhaqaale ayay u tahay in guushayada DMX ay la mid tahay curiyeyaashayada kala duwan ee hoos yimaada awoodda wax qaadisteeda.FYL waxay si tartiib tartiib ah u cusboonaysiin doontaa alaabada cusub ee doorashadaada waqtiyo kala duwan.
Waxaan bixinaa nidaamyada dhaqdhaqaaqa nalalka LED-ka ee u gaarka ah oo awood u siinaya isku-dhafka qumman ee iftiinka iyo dhaqdhaqaaqa.Nidaamyada iftiinka iftiinka ayaa ah mid sahlan oo iftiin leh si kor loogu qaado ama hoos loogu dhigo shay iftiin leh oo ah isku darka farshaxanka iftiinka iyo farsamada farsamada.Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku siin karnaa adeegyo la habeeyey iyadoo loo eegayo baahidaada.
Waxaan leenahay naqshadeeyayaasha'waaxda leh waayo-aragnimada naqshadaynta mashruuca in ka badan 8 sano.Waxaan ku siin karnaa naqshadeynta naqshadeynta, naqshadeynta naqshadeynta korantada, naqshadeynta fiidiyoowga 3D ee nalalka kinetic ee mashruucaaga. Waxaan ku siin karnaa naqshadeynta naqshadeynta iyo naqshadeynta fiidiyoowga 3D ee nalalka kinetic ee mashruucaaga.
Waxaan leenahay waayo-aragnimada wanaagsan ee injineerada nidaamka iftiinka kinetic ee adeegga rakibaadda ee mashaariicda kala duwan.Waxaan ku taageeri karnaa injineerada inay u duulaan goobtaada mashruuca si toos ah loogu rakibo ama u diyaarino hal injineer hagaha rakibida haddii aad leedahay shaqaale deegaanka ah.
Waxaa jira laba siyaabood oo aan ku taageeri karno barnaamijyada mashruucaaga.Injineerkeena ayaa u duulaya goobtaada mashruuca si uu toos ugu diyaariyo nalalka dhaqdhaqaaqa.Ama waxaanu samaynaa barnaamij-hore u samaynta laydhka kinetic oo ku salaysan nakhshad ka hor intaan la dhoofin.Waxaan sidoo kale taageernaa tababbarka barnaamijyada bilaashka ah ee macaamiisheena kuwaas oo doonaya inay bartaan xirfadaha nalalka kinetic ee barnaamijyada.
Guddi saddex xagal
Iftiin saddex xagal
Alaabta sifaysan Hot Tags Khariidadda goobta.xml